Talaado, Dec 1 , 2020-Wajigii labaad shir magaalada Muqdisho uga furmay midowga musharixiinta – LaacibOnline
Talaado,December, 01, 2020 (HOL) – Magaalada Muqdisho waxaa xalay ka furmay Wajiggii labaad shir ay yeelanayaan midowgga musharixiinta doorashada 2020-21 oo dhawaan shir ugu soo dhamaaday Muqdisho ka soo saaray war-murtiyeed ka koobnaa 18 qodob.
”Shirkan labaad ee noo furmay waa mid aynu -dabalgal ku sameyneyo wixii ka qabsoomay qoddobadii aynu ka soo saarnay shirkii koowaad ee musharixiinta u soo dhamaaday, waxaana mar walba la hadalnaa madaxda dowlad gobolleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe, sidoo kale waxaa iska warqabnaa beesha caalamka oo aan ka wadalnaa sidii ay dalkani uga dhici laheyd doorasho xor ah oo xalaal” ayuu yiri Ridwaan Xirsi Maxamed
Talaado, December, 01, 2020 (HOL) – Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland waxaa ka socda mudaharaad loogasoo horjeedo diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga kadib markii madaxweyne Deni uu shalay soo saaray wareegto lagu mannuucayo in lacagta shilin Soomaaliga lagu qaado canshuurka ilaha dakhliga.
Talaado,December, 01, 2020 (HOL) – 12 ka tirsan xoogagga Ururka Al-shabaab ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug maalintii shalay.
Talaado, December, 01, 2020 (HOL) – Sida uu shaaciyay Bangiga Qaranka ee Itoobiya waxaa maanta guud ahaan la joojiyay isticmaalka lacagtii hore ee Itoobya, iyadoo aan waxba lagu kala iibsan doonin laga bilaabo maanta oo Talaado ah.
Talaado, December, 01, 2020 (HOL) – Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamo Soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin dagaalka ka socda waqooyiga dala Ethiopia ee u dhexeeya ciidamada qaranka Ethiopia iyo jabhadda TPLF ee Tigreega.
Talaado, December, 01, 2020 (HOL) – Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta KMG u ah dowlad gobolleedka Jubbaland ayaa sheegaya in koox hubeysan toogasho ku dileen Dr Yuusuf Axmed oo ka mid ahaa dhaqaatiirta magaalada Kismaayo.
← Canada’s PNP immigration results in November 2020
Talaado, Dec 1 , 2020-Madax ka tirsan Hirshabeelle oo ka badbaaday shil diyaaradeed xili ay Baledweyne kusii jeedeen →
Arbaco, Dec 23, 2020-Midowga musharixiinta ” Waa in madaxweyne Farmaajo loo aqoonsadaa Qaswade